Tajaajilli Interneetaa Seera too'annaa haaraa barbaachisa. K-2ffaa- Mark Zuckerberg. | oroict.com Solutions
Tajaajilli Interneetaa Seera too'annaa haaraa barbaachisa. K-2ffaa- Bitk Zuckerberg. | oroict.com Solutions oroict.com Solutions
Tajaajilli Interneetaa Seera too’annaa haaraa barbaachisa. K-2ffaa- Mark Zuckerberg.
[Barruu Mark Zuckerberg Wasgington Post irratti maxxanse Afaan Oromootti kan Hiike Abdiisaa Bancaati.]
Sadeessoo, Mateenyi haalaafi eegumsa deetaa seera waaltawaa barbaada. Ummanni addunyaa hundarraa ittiin seera ittiin bulmaata mateenyaa(privacy) kan seera too’annaa deetaa waliigala Gamtooma Awurooppaa cinatti, akkasuma anis nan amana. Akkan ani amanutti Interneetaaf gaarii kan tahu biyyootni hedduu seera calqabbii GDPR(Genera data protection regulation) osoo hojitti hiikaniiti.
Seerri haaraa Biyyoota Ameerikaafi addunyaarrtti bahu seera eegumsa GDPR of keessaa qabu giddugaleeffatee tahuu qaba. Mirga kee kan odeeffannoo barbaadde gara barbaaddeen akka argattu siif eegu ta’uu qaba, kanumaan walqabatee dhaabbileen ammoo odeeffannoo nageenyaaf akka fayyadaman(Safety purpose) fi tajaajila barbaachisaa laatuuf tahuu akka qabu. Deetaan dhiyeenyatti olaayamuu qaba, kunis qaamni hayyama hin qabne akka hinarganneef gargaara waan taheefi akkasumas dhaabbaticha akkamitti akka qabatu kan ibsuu,fkn kan akka Feesbuukii dogoggora yoo uuman akkamitti akka itti gaafatamuu qabu kan akeeku ta’uu qaba.
Ani akkan amanutti Seerri waaltawaan akka Idil-addunyaatti akka hojiirra ooluudha, kan biyyootni dhuunfaan ykn naannoon baafatan irra. Kunis Interneetiin akka sodaa hin taaneefi adda dureewwan kalaqaa(entreprenuers) oomishaafi tajaajila hunda giddugaleeffate oomishuufi dhiyeessuuf akkasumas hundinuu eegumsa walfakkaataa akka argatuuf daandii saaqa.
Heera baaftuun hedduu seera mateenyaa(Privacy regulation) kana hubatanii jiru, akkan amanutti isaan gaafilee GDPR irratti banaa tahan hedduu ni deebisu jedheen abdadha.
Amma nuti kan barbaadnu fedhii hawaasaa guutuuf Odeeffannoo yoom yoom akka itti fayyadamnuufi Tekinoolojii haaraa akka AI(Artificial Intelligence) wajjiin yoom akka dhimma itti baane kan nu fayyadu seera ifa ta’eedha.
Xumurrarratti, seerri haaraa haala seerawaa itti fayyadama deetaa mirkaneessuun qophaawuu qaba. Deetaa tajaajila tokko waliin yoo kennite gara biraatti jijjiirachuu danda’uu qabda. Kunimmoo hawaasni akka filannoo qabaatuufi waa-uumtotni amma akka waan haaraa kalaqaniifi dorgommii keessa seenan taasisa.
Dubbisi | Read Biyyoonni addunyaa qabiyyeewwan miidhaa geessisan ittisna jechuudhaan mirga yaada ofii ibsachuu lammilee sarbuu hin qaban.
Kunimmoo Interneetaaf waan gaariidha – Tajaajila hawaasni barbaadu uumuuf. Kanaaf giddugala waa uumuu kan uumneef. Itti fayyadamni daataa inni dhugaan kan akka giddugala deetaa keenyaa(Our platform) kan fayyadamaan yoo fedhe seenee(login) deetaa isaa yeroo barbaadetti naqachuu(download) danda’u. Garuummoo kun seera qabatamaa eenyutu odeeffannoo sanaafeegumsa akka godhu ykn akka itti gaafatamu kan qajeellotti seerri lafa kaayu jiraachuu qaba.
Kunis seera waaltawaa odeeffannoo ittiin waljijjiiran hanga qabiyyee odeeffannoo sanaa ofkeessaa qabu qopheessuu gaafata.
Akkan amanutti Feesbuukiin dhimma teessoo gargaarsaa itti gaafatamumm qaba, kanumaan walqabatee animmoo seera baaftota Idil-adunyaatiin waliin marii godhuu fedha.
Sirna Ammayyaawaa(Advanced system) qabiyyee miidhaa qaqqabsiisuu danda’an barbaadu, keessa-seenumsa Filannoo(election interference), beeksisa ifaafi qabatama tahe irratti hojjannee jirra. Garuu ummanni seera dhaabbanni dhuunfaa baase hojitti hiikuuf ykn itti-buluuf heddu eeyyamamaa miti ykn fedhii hin qabu.
Akka hawaasatti maal nubarbaachisaafi seerichi hangam nubarbaachisa jennee walfalmii heddu gooneerra. Qabxiileen Afran kun hedduu barbaachisoodha, haatahuu malee ammas baldhinaan wanni irratti mari’atamu heddu.
Seerotni Interneeta too’atan dhalootni waa uumu tajaajiloota adda addaa kanneen addunyaa jijjiiruu danda’an akka uumu ykn dhiyeessuu fi bu’aa jijjiirama jireenya hawaasaatiif waa lafa buusa. Yeroon sirrii Seerri itti fayyadama Interneetaa kun haaromfamee itti-gaafatamummaa sirrii ummataaf, dhaabbileedhaaf fi Mootummootaaf akka gara fuula-dura tarkaanfatan akeekamu amma.
Seeraa Haaraa Itti Fayyadama Interneetaa